နေလင်းအောင်: ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်
The Best English မဂ္ဂဇင်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ တွင် ဖော်ပြပါရှိပြီး...
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နံနက်တိုင်း အိန္ဒိယ ပေါင်မုန့်ပြားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ချာပါတီမုန့်ကို သူမမိသားစုအတွက် ဖုတ်ပေးသလို အိမ်ဘေးမှာ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဆာလောင်ငတ်မွတ်သူ တစ်ယောက်ယောက်အတွက် အပိုတစ်ခု ဖုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အပိုချာပါတီမုန့်ကို အစားအစာ လိုအပ်နေတဲ့ မည်သူမဆို ယူဆောင်သွားနိုင်ဖို့ အိမ်ပြတင်းအောက်ဘောင်မှာ တင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ခါးကုန်းအဘိုးကြီးတစ်ဦးဟာ နေ့တိုင်းရောက်လာပြီ အပိုချာပါတီမုန့်ကို ယူသွားကြောင်း သူမ သတိပြုမိပါတယ်။ သူဟာ ကျေးဇူးစကား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမဲ့အစား “သင်ပြုတဲ့မကောင်းမှုဟာ သင်နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာ သင့်ဆီပြန်လာပါတယ်”ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ ထပ်ကာထပ်ကာပြောဆိုရင်း သူ့လမ်းသူ ဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သူဟာ ဒီစကားကိုပဲ ဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးကတော့ အလွန်စိတ်ဆိုးလာတော့တယ်။ “ကျေးဇူးစကားလေးတစ်ခွန်းတောင် မပြောဆိုဘူး”လို့ သူမကိုယ်သူမ ပြောနေမိတယ်။ “နေ့တိုင်း ဒီခါးကုန်းအဘိုးကြီးကတော့ ဒီကဗျာလေးကိုပဲ ထပ်ကာတလဲလဲ ပြောဆိုနေပါလား။ သူပြောချင်တဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲမသိဘူး”
တစ်နေ့မှာတော့ သူမဟာ အလွန်ဒေါသ ထွက်လာတဲ့အတွက် သူ့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ “ငါတော့ ဒီခါးကုန်းအဘိုးကြီးကို မောင်းထုတ်မှဖြစ်တော့မယ်”လို့ သူမက ပြောဆိုပါတယ်။ သူမဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ…။သူ့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ချာပါတီမုန့်ထဲ အဆိပ်ခပ်လိုက်ပါတယ်။
မုန့်ကို ပြတင်းဘောင်မှာ ထားမည်လုပ်တဲ့အခါ သူမရဲ့လက်တွေ တုန်လှုပ်နေပါတယ်။ “ငါဘာတွေများ လုပ်နေမိပါလိမ့်နော်”လို့ သူမက ပြောဆိုလိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပင် သူမဟာ ချာပါတီမုန့်ကို မီးဖိုထဲပစ်ထည့်ရင်း နောက်တစ်ခုဖုတ်ပေးကာ ပြတင်းဘောင်ပေါ် တင်ထားလိုက်တော့တယ်။
ခါတိုင်းကဲသို့ပင်…ခါးကုန်းအဘိုးကြီးရောက်လာကာ ချာပါတီမုန့်ကိုယူရင်း “သင်ပြုတဲ့မကောင်းမှုဟာ သင်နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာ သင့်ဆီပြန်လာပါတယ်”လို့ ထပ်ကာထပ်ကာ ရေရွတ်ပါတယ်။
ခါးကုန်းကြီးကတော့ အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒေါသစစ်ပွဲကို သတိမမှုမိဘဲ သူ့လမ်းသူ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အမျိုးသမီးကြီးဟာ ပြတင်းဘောင်မှာ ချာပါတီမုန့်တင်လိုက်တိုင်း ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးဖို့ အဝေးတစ်နေရာထွက်သွားတဲ့ သားဖြစ်သူအတွက် ဆုတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သားအကြောင်း သတင်းအစအန မကြားရသည်မှာ လပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီမို့ ဘေးမသီရန်မခ ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက် အမြဲဆုတောင်းနေတာပါ။
အဲဒီနေ့ညနေခင်းမှာပဲ အိမ်တံခါးမှာ ခေါက်သံပေါ်လာပါတယ်။ သူမ တံခါးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ တံခါးဝမှာရပ်နေတဲ့ သားဖြစ်သူကိုတွေ့တော့ အံ့သြသွားပါတယ်။ သူဟာ ပိန်လီဖျော့တော့ပြီး အဝတ်အစားတွေလည်း စုတ်ပြဲနေပါတယ်။ ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေပြီး အားလည်းနည်းနေပါသေးတယ်။
သူ့အမေကိုကြည့်ရင်း “အမေ…ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်လာတာ ကံကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ဒီအိမ်ကနေ တစ်မိုင်လောက်အကွာမှာ ကျွန်တော် အလွန်ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေတဲ့အတွက် လဲကျသွားတယ်။ ကျွန်တော် သေချင် သေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခါးကုန်းအဘိုးအိုတစ်ဦး ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ဖြတ်သွားတယ်။ အစားအစာ အနည်းငယ်လောက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တော့ သူဟာ ကြင်နာသနားတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ချာပါတီတစ်ခုလုံး ပေးခဲ့ပါတယ်”
“သူဟာ ကျွန်တော့်ကို မုန့်ပေးတဲ့အခါ အဲ့ဒီမုန့်ဟာ သူနေ့ တိုင်းစားနေတဲ့ မုန့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ဟာ သူ့ထက် ပိုပြီး လိုအပ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကိုပဲ ပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့”
ဒီစကားကြားတဲ့အခါ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာ ဖြူဖပ်ဖြူရော် ဖြစ်သွားတော့တယ်။ သူမဟာ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းမတ်ဖို့ အိမ်တံခါးကို မှီလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်က သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ချာပါတီမုန့်ကို အဆိပ်ခပ်ခဲ့တာ သတိရလိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီမုန့်ကို မီးဖိုထဲ ပစ်မထည့်လိုက်လို့ကတော့ သူမသားဟာ စားမိပြီး သေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီနောက်တော့ “သင်ပြုတဲ့မကောင်းမှုဟာ သင်နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာ သင့်ဆီပြန်လာပါတယ်”ဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို သူမ နားလည်လာတော့တယ်။
ဒီပုံပြင်ရဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း မရှိစေကာမှု ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နေပါတဲ့။
This went on day after day. The woman felt very irritated. "Notaword of gratitude," she said to herself. "Every day this hunchback utters this jingle! What does he mean? "
"When he gave it to me, he said, 'This is what I eat every day. Today, I shall give it to you, for your need is greater than mine!''
Posted by နေလင်းအောင် at 10:48 AM